एक तह बढुवा पाउँला ? - Shikshak Maasik
एक तह बढुवा पाउँला ?
by • • जिज्ञासा जवाफ • Comments (0) • 1694
२०४८ कात्तिकमा बर्दिया जिल्लाबाट स्थायी नियुक्ति पाएँ; २०६३÷१०÷१५ मा द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएँ । अब मैले नोकरी छोड्दा एक श्रेणी बढुवा पाउँछु कि पाउँदिनँ ?
जयकालिका मावि, कालिका–४, बर्दिया
सेवा अवधिभर एक पटक पनि बढुवा नपाएको शिक्षकको हकमा मात्रै अवकाश लिंदा एक तह बढुवा दिने प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा छ । त्यस अनुसार तपाईंले नोकरी छोड्दा अब बढुवा पाउनुहुने छैन ।
कृष्णप्रसाद शर्मा न्यौपाने
जेसिज कि जेसिस ?
कक्षा–८ को हाम्रो सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकको पाठ–७ को ‘सामाजिक संघ÷संस्थाहरू’ भन्ने शीर्षकको पाठ पेज नं. ४३ मा ‘जेसिस’ भनेर उल्लेख गरेको पाइयो वास्तवमा ‘जेसिज’ हुनुपर्ने होइन र ?
झ्म्केश्वरी मावि, पालुङ, मकवानपुर
अंग्रेजीको ुव्बथअभभकु लाई ‘जेसिज’ भनेर उच्चारण गर्ने गरिएको छ । त्यस अर्थमा तपाईंले उठाउनुभएको जिज्ञाशा जायज छ । आउँदो वर्ष कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तक फेरिएर आउनेछ । सोही संस्करणमा यसलाई सच्च्याएर ‘जेसिज’ बनाइनेछ ।
छुट्टै अस्पताल छैन
म २०४८ सालमा स्थायी नियुक्ति पाएको शिक्षक हुँ । अहिले ५४ वर्ष पुगें । आउँदो दशैंपछि अवकाश लिने सोचाइमा छु । यसरी अनिवार्य अवकाश अगावै अवकाश लिंदा थप सुविधा पाइन्छ कि पाइँदैन ? साथै शिक्षक बिरामी हुँदा औषधोपचार गराउने छुट्टै अस्पताल छ कि छैन ?
श्रमरानी मावि, बूढीचौर तिराम, प्यूठान
शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिमकै सुविधा तपाईंले पाउनुहुनेछ । त्यस बाहेक अन्य सुविधा पाइँदैन । शिक्षकको उपचारका निम्ति छुट्टै अस्पताल छैन ।
शाखा अधिकृत, विद्यालय शिक्षक किताबखाना
विशेष बढुवा हुन्छ ?
आन्तरिक लिखित परीक्षा तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिक तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका शिक्षकको विशेष बढुवा हुन्छ कि हुँदैन ?
नेरा उमावि, रेख, फलावाङ, सल्यान
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन गरेर एक पटकका निम्ति विशेष बढुवाको अवसर दिइएको हो । अब फेरि शिक्षकको विशेष बढुवा हुने छैन ।
उपसचिव, शिक्षक सेवा आयोग
तपाईंले भने जस्तो पाठ्यक्रममै छैन
कक्षा–४; विषयः विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा; मुद्रणः २०६८
उक्त विषयको पूर्णांक र पाठ्यभार विभाजनमा ‘विज्ञान तथा स्वास्थ्य’ र ‘शारीरिक स्वास्थ्य’ गरी दुई भागमा विभाजन गरी पाठ्यभार ४–४ कायम गरिएको छ । यसमा शारीरिक स्वास्थ्य भनेको के हो ? विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि र व्यावहारिक प्रयोजन साँच्चै बराबर हुन सक्छ ?
चक्रेश्वरी मावि, घेगड, अछाम
कक्षा ४ मा विज्ञान तथा वातावरण विषय र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयलाई क्रमशः ५०–५० पूर्णांक र ४–४ पाठ्यभार निर्धारण गरिएको छ । पाठ्यक्रम संरचना अनुसार कक्षा ४ मा तपाईंले भने जस्तो ‘विज्ञान तथा स्वास्थ्य’ र ‘शारीरिक स्वास्थ्य’ भन्ने विषय नै छैन । तपाईंले कुन स्रोतबाट त्यो कुरा भेट्नुभयो, हामीलाई थाहा भएन ।
नेपालको राष्ट्रिय रूख र फल कुन हो ?
शिक्षक मासिकमा कम्प्युटर र सूचनाप्रविधि सम्बन्धी नियमित स्तम्भ समावेश गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ?
लीला कु. राई,
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय रूख र फलको निर्धारण नै गरेको छैन ।
(त्यस्तो स्तम्भको प्रयोजन के हुने ? लक्षित पाठक को हुने ? के कस्ता सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो ? यस सम्बन्धमा पाठकहरूबाट पर्याप्त सुझवहरू प्राप्त भएको खण्डमा त्यस्तो स्तम्भबारे सोच्न सकिनेछ ।
– सम्पादक, शिक्षक मासिक)
कहिले सूचीकृत भए ?
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन–कुन मितिमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका थिए ?
हात्तीचरन प्रावि, छतिवन, मकवानपुर
युनेस्कोको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् १९८४ र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हुन् ।
निरन्तर अस्थायी सेवा गरे बापत प्रति वर्ष १.२५ का दरले शिक्षक बढुवामा अंक दिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । कुनै शिक्षकले २०५२ सालको आयोगको परीक्षाबाट अर्कै जिल्लामा २०६०÷०८÷१५ गते स्थायी नियुक्ति मितिको पत्र पाएको अवस्थामा निज शिक्षक अस्थायी कार्यरत भएको जिल्लाको रेकर्ड अनुसार २०६०÷०८÷३० गतेसम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज शिक्षक २०६०÷०९÷०१ देखि स्थायी नियुक्ति पाएको जिल्लाको विद्यालयमा हाजिर हुन जाँदा त्यहाँको स्थानीय शिक्षकलाई हटाएको विरोधका कारण २०६०÷०९÷०१ देखि हाजिर हुन दिइएन । जिशिकाले ‘हाजिर गराउनू’ भनी चेतावनी पत्र पठाएपछि निजलाई २०६०÷०९÷०६ देखि मात्रै हाजिर हुन दिइयो । यस्तो अवस्थामा निज शिक्षकको अस्थायी सेवा निरन्तर बनाउन के गर्नुपर्ला ? अथवा पहिले पढाएको विद्यालयको रेकर्डमा २०६०÷०९÷०५ गते बनाई जिशिकाबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
दीनदयालु निमावि, थान्चोक, मनाङ
अस्थायी सेवा गणनाका निम्ति सेवा निरन्तर देखिनुपर्छ । एक दिन मात्रै गैरहाजिर भए मात्रै पनि सेवा निरन्तर भएको मान्न सकिंदैन । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको शिक्षकले विद्यालयमा हाजिर हुन नपाउनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई जिशिकाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । यदि जिशिकाले अस्थायी सेवा निरन्तरता सम्बन्धी प्रमाणित गरिदिएको खण्डमा आयोगले त्यसलाई स्वीकार्न सक्छ ।
स्रोत शिक्षक जिशिकाले तोक्छ
विशेष कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको स्रोत शिक्षक सेवा निवृत्त हुँदा सो स्थानमा राखिएको सोही विभागको तालीमप्राप्त सट्टा शिक्षक स्वतः स्रोत शिक्षकका रूपमा पुनस्र्थापन हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
भवानी उमावि (बहिरा विशेष कक्षा), कुसुमखोला, पाल्पा
तपाईंले भने जसरी स्वतः पुनस्र्थापन हुन मिल्दैन । तोकिएको मापदण्ड अनुसार स्रोत शिक्षकको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित जिशिकालाई मात्रै छ ।
शब्दहरू फरक परे नि !
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित २०६८ को परीक्षण संस्करण र २०७० मा प्रकाशित कक्षा ६ को नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यपुस्तकमा निम्न शब्दको लेखाइमा अन्तर रहेको देखिन्छः
साथै कक्षा ६ को नेपालीमा पेज नं. ८१ मा ‘राती’ र पेज नं.१४२ मा ‘राति’ लेखिएको छ । यस्तो अन्तरलाई कसरी बुझने ?
जनजागृत निमावि, चौमाला–४, कैलाली
परीक्षणका निम्ति तयार गरिएको कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तकमा पुरानै वर्णविन्यासको प्रयोग गरिएको भएता पनि नेपाल सरकारले २०६९÷०४÷२३ मा वर्णविन्यासको नयाँ नियम स्वीकृत ग¥यो । त्यही नियमका आधारमा २०७० सालमा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा फरक वर्णविन्यास प्रयोग गरिएको हो । अतः पछिल्लो नियमलाई आधार मानेर शिक्षण गर्नुहुन अनुरोध छ । साथै पेज नं. ८१ मा उल्लिखित ‘राती’ शब्द चाहिं शुद्ध हो ।
सच्याइएकोः गतांकमा प्रकाशित निम्न प्रश्नको उत्तर अर्कै ‘कोलम’मा पर्न गएकोले सच्याइएको छ –सं.
तथ्यांक ‘अपडेट’ भएन
२०६८ सालको जनगणनाले नयाँ तथ्यांकहरू दिए पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकमा ‘अपडेट’ गरिएको पाइँदैन । पाठ्यपुस्तकमा २०५८ सालकै तथ्यांक उल्लेख गरिएका छन् । नयाँ तथ्यांक आउनासाथ त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा तुरुन्त थप्न मिल्दैन र ? विशेषतः कक्षा १० मा जनसंख्या विषय अध्यापन गर्नुपर्दा कुन तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्ला ?
देवीप्रसाद गौतम, भानु उमावि, अर्जुनधारा–६, झपा
प्रेमराज गौली, महेन्द्र मन्दिर मावि, परेवाडाँडा, लमजुङ
२०६९ मंसीरमा राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतीजा आउँदा पाठ्यपुस्तकको छपाइ शुरू भइसकेको थियो । त्यसैले नयाँ आँकडालाई पाठ्यपुस्तकमा ‘अपडेट’ गर्न सकिएन । आउँदो संस्करणमा ‘अपडेट’को प्रयास गरिनेछ । यदि त्यो सम्भव भएन भने पाठ्यपुस्तकसँगै नयाँ आँकडा सहितको शुद्धिपत्र पठाइनेछ । जनगणनाको पछिल्लो आँकडा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा २०५८ कै नतीजालाई आधार मानेर शिक्षण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । पाठ्यपुस्तकमा पुरानो आँकडा भए पनि शिक्षकले पत्रपत्रिका, सन्दर्भ सामग्री र इन्टरनेटबाट नयाँ आँकडा जुटाएर कक्षामा शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गणेशप्रसाद भट्टराई, उपनिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र